Kedu ihe kacha mma ikuku na-ekpo ọkụ? - Mma
Ngwongwo ikuku na-ekpo ọkụ na-adịkarị mkpa? Nke a bụ ihe n'eziokwu anyị
Are Hot Air Brushes Actually Worth Hype
’Ve nụla ka ndị mmadụ na-ekwu okwu banyere ahịhịa ikuku na-ekpo ọkụ nke a sị na ọ na-eme ka ndụ dị otu puku ugboro dị mfe. Ya mere, gịnị bụ nnukwu nsogbu? A na-eji brushes abụọ a na-arụ otu ụdị moto dị ka draị ntutu gị, nke pụtara na ọ dries nke ọma na na-agbatị mgbe ọ na-ewepụ mkpa ọ dị ịgbanye agba gburugburu na ngwaọrụ dị ọkụ.
Ma, enwere m obi abụọ banyere ahịhịa ikuku na-ekpo ọkụ. M nụrụ niile otuto ma ka na-eche otú ọma a kpokọtara ntutu draya – dị ka contraption n'ezie ọrụ. Nke pụtara otu ihe: Oge eruola ka ha nwalee ha. Ya mere, akpọkọtara m ndị ọrụ ibe PureWow isii ma mee ka ha rie nnwale m na-abụghị nke sayensị.
Enyere m onye ọ bụla na-arụkọ ọrụ m (onye, ​​BTW, ha niile nwere ntutu dị iche iche sitere na site na nnukwu obi na-agbatị) otu ikuku ikuku dị iche iche iji gbalịa tupu ịkọ akụkọ. Nsonaazụ ... bụ akpa agwakọtara. Pịgharịa gaa n'ihu maka nkọwa gbasara omume edozi isi ha na nyocha ha na-akwụwa aka ọtọ banyere ngwaọrụ ha gbalịrị.
Njikọ: Ihe kacha mma ikuku 3 na-ekpo ọkụ na Amazon
1. Tester: Dena Silver, Onyeisi Ejiji
Hairdị ntutu: Enwere m ntutu, na-agwụ ike ntutu dị mma. M na-ahapụ ya ka ọ kpọọ ikuku ma ọ ga-ewe ihe dị ka nkeji iri atọ ma ọ bụ obere. Ee ee, nwere ihe dị ka pasent efu olu.
Nwara: DryBar ugboro abụọ gbara draya ahịhịa
Kedu ka ị ga-esi kọwaa ahụmịhe gị na ahịhịa ikuku dị ọkụ?
Oge izizi m jiri ahịhịa Drybar, eriri m yiri frizzy, akọrọ ma ọ bụghị etu m siri chee. N'ihi ya, m kpebiri itinye nyocha ma kụọ YouTube maka nkuzi kacha mma ebe ahụ ( Nke a bụ ihe kacha baa uru). Mgbe m mụtara ikewa ntutu m na nkebi isii, na-akọwapụta etu m ga-esi gbanye isi m na ụzọ kacha mma iji tinye olu n'ihu ntutu m, amatachala m nke ọma. Dị ka ọ dị, M nyere iwu obere vidiyo na Amazon iji nyere aka ngalaba m aka ka mma ( ndia , ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata).
Ọ dị mfe ma ọ bụ sie ike karịa ahụmịhe ị na-emekarị?
ga na-ekiri ihe nkiri akụkọ ịhụnanya
Ebe ọ bụ na anaghị m eme ihe ọ bụla na ntutu m, iji brọsh bụ naanị mbọ ọzọ. Mana achọpụtara m na nchara a kacha arụ ọrụ na ntutu m mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ kpọọ nkụ, ya mere ọ na-ewe naanị minit iri ma ọ bụ karịa, nke a abụghị nnukwu nsogbu.
Ndi ntutu gị dị mma, otu ma ọ bụ ka njọ karịa ka ị na-ehichakarị?
Ọ dị ezigbo mma. Nke mere na otu enyi m jụrụ m ma enwere m ịkpụ ntutu n'oge na-adịbeghị anya, ajụjụ m na-enwetabeghị, ọbụlagodi na m dị ọhụrụ site na salon.
Ga-anọgide na-eji ngwá ọrụ a dị ọkụ na usoro ị na-eme mgbe niile?
Hell na ee. Ikwu eziokwu, a na m eji ya ụbọchị ọ bụla ọzọ kemgbe m bidoro ule a, na enweghị m atụmatụ ịkwụsị n'oge ọ bụla. Eleghị anya m ga na-ekiri nkuzi YouTube iji chọpụta ụzọ ọhụrụ eji ya. Ihere adịghị!
Zụta ya ($ 150)
2. Tester: Jillian Quint, Onye isi na Isi
Nwara: Revlon Otu-Nzọụkwụ Nhicha ntutu & Volumizer Hot Air Brush
Hairdị ntutu: Oke, esichara na asat. Ọ ga frizz na aro nke iru mmiri. M na-asacha ma na-agbapụ ya kwa ụbọchị iri, na-eji brush gburugburu na draị ntutu Dyson. M na-echekarị ruo mgbe ntutu m kachasị akọrọ, wee jiri ihe dị ka nkeji 30 wee mee ihe.
Dị mfe! M sara ntutu m, dinara ya na mmiri wee fesa ya obere mmiri na ihe na-echebe okpomọkụ n’ụtụtụ. Ejiri m obere vidiyo mee nkebi site na ngalaba, mana ọ dịkarịrị mfe iji otu aka maka ngwa ọrụ na nke ọzọ iji kechie ngalaba (kama ijide brush n'otu aka na draị ntutu na nke ọzọ).
Ọ dị nnọọ mfe ma were naanị 12 nkeji, ma ọ bụ nkụ na-amalite, n'ihi ya, m na-nyochawa naanị styling.
Otu ihe. Enwere m olile anya dị elu na ahịhịa a ga-emeghachi nsonaazụ nke ọkachamara ọkachamara, mana ka ọ dị ugbu a, ọ bụghị ikpe.
Kpamkpam. Ọ na-eweghachi m nkeji iri abụọ nke ndụ m!
Zụta ya ($ 60)
3. Onye nyocha: Jenny Jin, Onye Nchọ Mma
Hairdị ntutu: Oké, siri ike, na-adịkarị ntakịrị na ọchịchọ ịfụfụ na iru mmiri ma ọ bụ ozugbo ịsachara ya. Ana m ekwe ka ọ kpoo ka ọ kpọọ ikuku tupu m lakpuo ụra; ọ na-ewe a siri ike awa ma ọ bụ abụọ ka ọkpọọ na ya na bụ a ziri ezi ogwe aka mgbatị na na ukwu obere oge m na-anwa ịfụ ya.
Nwara: Dyson Airwrap zuru ezu Styler
Airwrap adịghị ka ngwá ọrụ ọ bụla ọzọ m gbalịrị tupu-ọ bụghịkwa naanị ikuku ikuku na-ekpo ọkụ n'ihi na enwere ọtụtụ mgbakwunye na ọrụ dị iche iche. Ejiri m ụlọ ọrụ na-edozi smoothing na gbọmgbọm nke anụ ọhịa ahụ na-acha nkenke 1.2 tupu m agbakwunye obere curls niile.
E jiri ya tụnyere igwe na-ehicha nkịtị na igwe na-agagharị, m ga-asị na ọ bụ ahụmịhe dị mfe karị n'ihi na ngwaọrụ ahụ n'onwe ya dị fechaa na mgbakwunye na-arụ ọtụtụ ọrụ maka gị.
Aga m asị na ọ dị mma karịa, na ọ nwere ọmarịcha na nkwado karịa ka ọ dị na mbụ. M na-ejikarị flatiron agbakwunye ụfọdụ ebili mmiri, nke na-adịtụ ntakịrị ka emegharị. Otú ọ dị, a na-eme ka curls Airwrap na-egbu maramara.
Aga m eji nke a n'ezie mgbe m crunched n'oge ma ọ bụ chọọ ịme ntutu m maka mmemme pụrụ iche, ah, ihe omume. Dịka m kwuru na mbụ, anaghị m etinye oge dị ukwuu na ntutu m, mana ọ bụrụ na ị bụ ụdị onye na-eme ka ntutu gị dị ọkụ mgbe mgbe ma na-agbaso ya mgba, nke a bụ nhọrọ dị ukwuu (na itinye ego!).
Zụta ya ($ 550)
4. Onye Nleba: Katherine Gillen, Onye na-ahụ maka nri
Hairdị ntutu: Nwa mara mma. Ọtụtụ mgbe ikuku-dries na minit 30 ruo elekere.
Nwara: InfinitiPRO nke Conair The Knot Dr. Detangling Hot Air Brush
N'ozuzu, ahụmahụ ahụ dị mma. Dị nnọọ mma. O nwere ike iwe m nkeji iri abụọ na ise iji si na mmiri zoo.
Nke siri ike, ebe ọ bụ na anaghị m emetụ ntutu m aka mgbe m sachara ya, mana ọ ga-abụkwa na ọ dị mfe karịa iji ịfụcha ọkpọ na ahịhịa.
Otu ihe, dị nnọọ ntakịrị straighter na smoother. Na ngalaba mpịakọta (ebe m na-enweghị ọtụtụ), o doro anya na ọ dị otu. Enwere m olileanya nke ịdị ka ihe ncha ntutu nke nwere ntutu bouncy, nke ekwenyeghi n'eziokwu, mana echeghị m na ọ bụ ngwaọrụ kwesịrị ekwesị maka ụdị ntutu m.
Hunny, mba. Ọ bụ mgbalị karịa m dị njikere itinye na ntutu m kwa ụbọchị, n'ihi na nsonaazụ ahụ yiri otu ihe na-emeghị. Enwetara m ntutu isi m na agba ma gbue midway site na nnwale a (na-eti mkpu na Phoebe na Molly na Blackstones), achọpụtara m ụzọ onye stylist na-eduzi ikuku na ngagharị na-agbada, nke na-eme ka ọ dị mma, ebe ngwaọrụ ahụ na-afụ ntutu. site na ahịhịa na isi ala, na-akpata frizzies. Na njedebe, echeghị m na nke ọ bụla n’ime ngwa ọrụ ndị a ga - edochi ezigbo agba ochie salonlọ Mmanya.
5. Tester: Charlie Kolbrener, Onye na-enyere Ndị Isi Aka
Hairdị ntutu: Dị nnọọ curly na ntakịrị nke nchịkwa (ma na a fun ụzọ). M na-ejikarị tawul akọọ ma ikuku kpọọ, nke na-ewe obere ihe karịrị otu awa.
Nwara: InfinitiPRO nke Conair Hot Air Paddle Brush Styler
Adị m obere ntutu isi, n'ihi ya arụghị m ọrụ dị ịtụnanya na ngwaọrụ ahụ. Ma mgbe m nwere nwanne m nwoke nyeere ha aka, ha rụrụ nnukwu ọrụ ma chee na ahịhịa ahụ dị mfe iji. O were m ihe dị ka minit 30 ruo 40 iji mee ya n'onwe m, o wekwara nwanne m nwoke ihe dị ka minit 25 ime ya. Ugboro abụọ a hapụrụ m ntutu kwụ ọtọ na ụdị Farrah Fawcett – esque feathered quality na ya.
Ike karị, mana usoro m na-emebu dị ntakịrị.
ndepụta nke akwụkwọ mkpali
Agaghị m, kama ọ bụ naanị n'ihi na m nwere mmasị na curls. Ọ bụrụ na ọ dị m mkpa ịgbatị ntutu m maka ihe, echere m na nke a ga-abụ nnukwu ngwaahịa iji mee ihe karịa ihe ndozi ọdịnala, nke ka ukwuu n'ihi na ọ dị ngwa ma dị mfe iji, n'agbanyeghị na ọ naghị emezi ntutu m ka ọ bụrụ kpamkpam dị ka ihe ndozi ọdịnala ga.
6. Onye Nleba: Chelsea Candelario, Onye na-enyere aka na Editorial
Hairdị ntutu: A na-akọwa curls m, ntakịrị na akụkụ frizzy, mana n'ozuzu ya na-egbu maramara ma dị nro. Ọ na-amasị m ịme ka ntutu m kpoo n'ihi na abughi m nnukwu onye na-ekpo ọkụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị nọgide na-enwe nkọwa ntụgharị m. Ọ na-ewe ihe dịka elekere abụọ ma ọ bụ awa abụọ iji kpoo ikuku, mana ọ bụrụ na m nweta ya agbatị na alọ Mmanya, ọ dị nso na 30 nkeji.
Nwara: Hot Tools Professional unyi nye otu Nzọụkwụ ịgba
Ngwaọrụ dị ọkụ dị mfe iji. O doro anya na ntutu m na-enweghị isi, agbanyeghị ọ na-adị arọ oge ụfọdụ ma ọ were ogologo oge iji kpoo mgbọrọgwụ m. Na mkpokọta, ọ na-ewe otu elekere tupu ntutu m takọọ kpamkpam.
Ọ dị m ka ọ siri ike karị n'ihi na ọ dị ogologo oge iji nweta ntutu m otu m chọrọ. Oge mbụ m nwara ahịhịa, njedebe m jọgburu onwe ya. Oge nke abụọ, ntutu m pụtara nke ọma ma achọpụtara m na ọ bụ n'ihi na m kwesịrị ime obere akụkụ-nke pụtara na m ga-etinye opekempe otu elekere ma ọ bụ karịa na ntutu m, ana m eme ya ọ bụghị nwee oge maka nke ahụ! Ejikwara m ọgwụ na-eguzogide okpomọkụ na-agba okpuru nke ugboro abụọ, nke ahụ nyekwaara aka.
Ọ bụrụ na m ga-atụnyere ya ka ọ na-ịgbatị ke salonlọ Mmanya, Echere m na ọ bụ mara mma yiri. Echere m na ahịhịa ahụ rụrụ ọrụ dị mma n'inye olu ma na-echekwa njedebe m.
O doro anya na ọ bụghị na usoro m na-eme kemgbe m na-eyiri ntutu m ọtụtụ oge, mana enwere m ike ịhụ onwe m na-eji nke a ma ọ bụ ugboro abụọ n'afọ mgbe m chọrọ ịgbatị ntutu m. N'ikwu eziokwu, ọ bụrụ na ndị gals ndị ọzọ na-achọ ịgbatị ntutu ha, m ga-enweta ihe ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na flatiron ụbọchị ọ bụla.
Zụta ya ($ 75)
7. Tester: Dabee Kaye, VP nke Brand Partnerships
Hairdị ntutu: Ogologo, ezi, wavy / frizzy ntutu. M na-ejikarị ion ion blow-draya na gburugburu brush na ion kpochapụ ya. Ọ na-ewekarị ihe dị ka nkeji iri iji kpoo ntutu m.
Nwara: John Frieda lonlọ Mmanya 1.5lọ Mmiri 1.5 Inch Hot Air Brush
Ọ bụghị maka m. Enweghị m mmasị na m ga-afụ ntutu m 80 pasent akọrọ m na-emebu ọkpọ ọkpọ, wee malite ịmalite ịfụ ntutu m na ahịhịa, ngalaba site na ngalaba.
Nke siri ike karị, ọ were oge buru oke ibu ma enwetaghị m nsonaazụ m na-enwetakarị. Ana m eme ya na nkeji iri ma nke a were ezigbo nkeji iri abụọ, echeghị m na ntutu m kpọrọ nkụ n'ezie.
Nke ka njọ. Ihe nchacha ahụ adịghị ọkụ nke ọma ma enweghị ike zuru ezu iji dozie ntutu m. Oge izizi m nyere m ike n’ihi na agbara m ume na ndidi. Oge nke abụọ m mechara ntutu m mana enweghị m ike idozi ya nke ọma ma enwere m frizz, nke m anaghị ahụkarị.
Mba, enweghị m oge ma ọ bụ ndidi. Nanị uru ọ bara bụ na m nwere ike itinye mgbatị na njedebe nke ntutu m, mana ọzọ, ọ naghị ekpo ọkụ ọbụlagodi ijide curl ahụ!
Ya mere, ee, brushes ndị a na-ekpo ọkụ abụghị maka onye ọ bụla ma ọ bụ ụdị ntutu ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ị ka na-itching ịnwale otu, m ga-atụ aro ịnwale Revlon ma ọ bụ Drybar mbipute ka ịmalite, dịka ha kachasị dị mfe ma bụrụ ndị a hụrụ n'anya n'etiti ndị nyocha anyị.
Ma otu ihe ọzọ? Ọ bụrụ n'ezie, n'ezie chọrọ iji ihe a mee ihe nke ọma, dị nkwadobe ngalaba ntutu gị, jiri brush na ọtụtụ mkpọchi akọrọ wee lelee vidiyo YouTube (ma ọ bụ abụọ) tupu ị nweta nsonaazụ kacha mma.
Njikọ: Ugboro ole ka I kwesiri ịsa ntutu gị, n’ezie? Celeb Hairstylist Weighs In
ụlọ akwụkwọ kwuru na foto
kedu ka anyị ga-esi kwụsị ntutu isi ada ada?
ntutu ntutu maka ụmụ agbọghọ obere ntutu
ụdị steak esie ya
natalie Portman na benjamin millepied
kacha mma ihunanya bekee fim niile oge
yoga asanas dị elu na aha